DeafUP Mobile Application - Dhizaini magazini
Mobile Application DeafUP inokoshesa kukosha kwedzidzo uye ruzivo rwehunyanzvi kunevematsi munharaunda yekuEast Europe. Ivo vanogadzira nharaunda iyo vanzwi vanonzwa uye matsi vadzidzi vanogona kusangana nekubatana. Kushanda pamwe ichave nzira yechisikigo yekupa simba nekukurudzira matsi kuti dzishande, kusimudza matarenda avo, kudzidza hunyanzvi hutsva, kuita mutsauko.
Zita rechirongwa : DeafUP, Vagadziri zita : Zlatina Petrova, Izita remutengi : Brandly Collective.
Mafoni matenga, mashandisiro uye software dhizaini
Mobile Application Zlatina Petrova DeafUP